Foreign OC - BrownishRabbit - Wattpad
Second Chance(System) [Completed]
1.8M 221K 177
#(Both Zawgyi And Unicode) Story Description (Zawgyi) မင်းရဲ့....ဘဝအဆုံးသတ်​ချိန်​မှာ.... မင်းကို...ကိုယ်​က...ဒုတိယအခွင့်​​အ​ရေး ​ပေးခဲ့မယ်​ဆိုရင်​​ရော~~~~ ကြို​ပြောချင်​တာက လူတိုင်းရနိုင်​တာ​တော့ မဟုတ်​ဘူး​နော်​~~~ 🍓🍓 မျက်​ဝန်းနက်​နက်​​လေး​တွေ က ကိုယ့်​ဆီမှာ တည်​တံ့​နေတာကို သ​ဘောကျတယ်​..။ 💜 အညို​ရောင်​ မျက်...
87.4K 13.9K 49
Unbreakable ( Unicode Version )
46K 4.3K 46
The Owner of Icy Heart ( Own Creation )
40.8K 4.4K 41
​ရခေဲနတျဝိညာဥျရှောငျပငျးရနျ ကိုအထကျဘုံကပေးသညျ့တာဝနျက လူ့ပွညျသို့ဆငျးကာ ဘုံကိုးခုအနာဂတျအတှကျ ရှယျကှမျးနတျစဈသူကွီးကို​ကောငျးကငျဘုံသို့ပွနျလညျကွှမွနျးနိုငျ​ရေးကူညီ​ပေးရနျဖွဈ၏။သို့ပမေယျ့ နှဈဦးကွားကံကွမ်မာ​တှကေ... " ရှယျကှမျး! ခငျဗြားက ကြ​နျောသိခဲ့တဲ့ အဈကိုနှဈမဟုတျ​တော့ဘူး...ငရဲမှာ သှားသလေိုကျတော့!!!" " ရနျ​အျော...
Everyone scare of me Except him!! (System) (Own Creation) [Completed]
225K 34.1K 93
FIND THE SOUL & LOVE HIM..... Start date_29.7.2020 End Date_ 26.12.2020. #Own Creation #Both Unicode and Zawgyi can be available!
My ShiFu Kiss me!!!(OC Completed )
171K 23.7K 67
Both unicode and Zawgyi ဆရာနဲ့တပညျ့coupleရဲ့ခဈြဖို့ကောငျးမှုလေးတကေိုနနျးတှငျးရေးရာ၊သိုငျးလောကရေးရာတနေဲ့ရောပွှနျးပီးဖတျရမှာပါ ဆရာနဲ့တပည့်coupleရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းမှုလေးတေကိုနန်းတွင်းရေးရာ၊သိုင်းလောကရေးရာတေနဲ့ရောပြွန်းပီးဖတ်ရမှာပါ 9.1.2021😘 ➡➡➡17.2.2021
573K 90.3K 63
'သောက်ကျိုးတွေ ချီးလိုနည်း!! ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်ကောင်...တစ်နည်းအားဖြင့် ငါ့သားက ငါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာ ယောင်လို့တောင်မတွေးမိဘူး!! ဒင်းကဘယ်တုန်းက ကွေးသွားတာတုန်း!! နောက်ပြီးတော့ ဟောဒီကမင်းဖေဖေငါက gayမဟုတ်ဘူးကွ!!'
The Loyal Male Lover
65.9K 7.5K 45
#Not Translation The illustration isn't my work so full credit to its rightful owner. Both Zawgyi and Unicode are available!
Bi An : Tale Of The Hell Flower
14.8K 3.3K 8
[Unicode+ZawGyi] Tags: BL, romance, fantasy, god,demon, tragedy, xianxia, own creation, own character Disclaimer: Cover photoမှာ pinterestမှာ downloadလာ​သော random img သာဖွဈသညျမို့ original artistအား အပွညျ့အဝ credit ​ပေးပါသညျ။ (Unicode) ကွာပနျးနတျဘုရားပိုငျယငျဟာ တဈ​​နမှေ့ာ မိစ်ဆာတဈ​ကောငျကို မ​တျောတဆ 'လမျးကွုံ' ဖ...
🍁🍁Hold My Hand And Be My Man🍁🍁 [Completed]
604K 97.9K 68
#(Zawgyi and Unicode) Welcome From My Second Fic..!!! ကိုယ်​​တော့်​ အချစ်​က.... လိ​မ္မော်​ရနံ့ သင်းသင်း​နဲ့ က​လေးငယ်​​လေး... 🍊🍊 ကိုယျတေျာ့ အခဈြက.... လိမ်မျောရနံ့ သငျးသငျးနဲ့ ကလေးငယျလေး... 🍊🍊
390K 66.6K 64
336K 38.1K 144
🍃 စစ်မြေပြင်ပေါ်က မျက်တောင်မခတ်တမ်း လူသတ်နိုင်တဲ့ ဆာမူရိုင်း တစ်ယောက်ရဲ့.. နှလုံးသားပလ္လင်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဟာ ချယ်ရီ ပန်းလို နူးညံသိမ်မွေ့တဲ့ မိနိးမပျိုမဟုတ်ဘဲ သူနဲ့ထပ်တူ သွေးအေးရက်စက်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ...🍃 🍃 စဈမွပွေငျပျေါက မကျြတောငျမခတျတမျး လူသတျနိုငျတဲ့ ဆာမူရိုငျး တဈယောကျရဲ့.. နှလုံးသားပလ်...
357K 39.5K 80
How to Flirt with the final boss
326K 44.7K 100
အပွာရောငျ hydrangeasတှရေဲ့အဓိပ်ပါယျကခှငျ့လှတျမှုကိုတောငျးခံခွငျးတဲ့ နောကျကမြှမငျးဆီကိုရောကျလာနိုငျတဲ့အတှကျ တောငျးပနျပါတယျ ကောငျလေး
Phoenix in the Flame(မီးလျှံကြားက ဇာမဏီ)
115K 12K 45
#Zawgyi #Unicode [Own Creation ]ရှင်းချန်း ဧကရီရဲ့ လူသိမခံဝံ့တဲ့ အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်~ မင်္ဂလာဦးညမှာတင် အေးစက်စက်ဧကရီဆီက အငြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဧကရာဇ်~ သုံးထောင်သော မိန်းမလှတွေကို ဧကရာဇ်နဲ့ ပေါင်းဖက်ရေးကို အလှည့်ကျ ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲ တွေးနေတတ်တဲ့ ဧကရီ~~
Oh! My Dear Minister (ချစ်လှစွာသော အမတ်မင်း)
326K 33.4K 29
ဒုတိအကြိမ်မြောက် BL ဖန်တီးမှု ဖြစ်ပါတယ် ဘာသာပြန်မဟုတ်ပါ လျန်တိုင်းပြည်ရဲ့ ရမ်းကားတတ်တဲ့ ဘုရင် ရင်ချင်းစူးက ကျင်းဝမ်ကို ငယ်ကတည်းက မနှစ်သက်ပါဘူး ကျင်းဝမ်က သူ့ကို သင်ကြားပေးရတဲ့ မင်းဆရာအမတ်ပါ ပြေလည်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရရှိလာပြီး မကြာမှီမှာပဲ ကျင်းဝမ်ကို ဟန်တိုင်းပြည် ဘုရင်မက ဓားစာခံ မင်းသားအဖြစ် ခေါ်ဆောင် သွားပြီးနောက် ဆယ့်နှစ်နှ...
72.1K 7.6K 21
ကိုယျဘာသာကိုယျနတော အကောငျးကွီးပါ.. ထသှားမှကြိုးမှနျးသိဆိုသလို တပညျ့မှေးလိုကျကာမှ တောငျသခငျရှောငျပိုငျယှီဆိုတဲ့ သူ့ရဲဘဝကွီးငါးပါးကို မှောကျတော့တာပဲ.. တဈယောကျယောကျတော့ ပွောပွပေးကွပါဦး.. သူပထမဆုံးနဲ့နောကျဆုံးအနနေဲ့ ပြိုးထောငျခဲ့တဲ့ တပညျ့က ဘယျလိုလုပျ ဝတျရုံလကျပွတျဖွဈသှားရတာလဲ..
1.1M 47.7K 21
Love ? Romance ? Who care .... when SEX is the Main Dish !!!
System Ah Li
1.6M 232K 194
Zawgyi Li Rong တစ်ယောက် သူ့မွေးစားအဖေဟာလုပ်ကြံခံရပြီး သူလဲ လူသတ်တရားခံလို့စွပ်စွဲခံနေရသည်။ထို့အပြင် သူ့ရဲ့ချစ်လှစွာသောညီကလဲ ထိုကိစ္စတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်နေတာကတစ်ကြောင်း သူနောက်လိုက်နေတဲ့ လူများကြောင့် ထွက်ပြေးရင်း ကားတိုက်ကာ system တစ်ခုထဲရောက်ပြီး တာဝန်ပေးခြင်းခံရတယ်...... Unicode Li Rong တဈယောကျ သူ့မှေးစားအဖဟောလုပျကွံခံရ...
214K 28.3K 41
Chinese, own creation, bl fiction
31.1K 2.2K 4
အင်း.. ယူရှင်းကို ရေးထားတာ နှစ်ဖက်မျှတော့ ဒါလေးကိုကတော့ တစ်ဖက်သတ် ပုံစံလေး ရေးဖြစ်တယ်.. တောင်းဆိုထားတဲ့ ညလေးရေ.. ကျေနပ်လားတော့ မသိဘူး ရေးတော့ ရေးတာပဲ
243K 22.4K 48
ခငျြ့ဟှဟှေ့ား ခငျြ့သူဌေးကွီး၏ကွီးမားသော ရညျရှယျခကျြကွောငျ့ ယောကျြာလေးဖွဈနပေမေယျ့ မိနျးကလေးဟနျဆောငျကာ နိုငျငံ၏ မငျးသား နှငျ့ လကျထပျထိမျမွားခဲ့ရသူ ရှောငျလုကငျြး လကျထပျခါနီး သောငျးကနျြသူတို့၏ လကျခကျြကွောငျ့ ဆုံးပါးသှားခဲ့သော သတိုးသမီးလောငျးအား မမနေို့ငျသော မငျးသား ကြုစုရှငျး ပုနျကနျမှုအဖွဈ သတျမှတျခံလိုကျရသော မိသား...
Daily Life with Kokonoe
90.6K 8.5K 18
671K 52.1K 46
394K 33.9K 19
337K 33.8K 41
BOY×BOY / OC / CROSSDRESS / MATURE / CHINESE THEME ​ယောကျာ်း​လေးတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​ပေမယ့်​ မိန်းက​လေးလို ဝတ်​ရသည်​ကို ငယ်​ငယ်​ထဲက သ​ဘောကျသည့်​ ​ရန်​ရီကျွင်း.. ဒါ​ပေမယ့်​ သူကမိန်းမစိတ်​ဝင်​​နေ​သော ​ယောကျာ်းတစ်​​ယောက်​​တော့ မဟုတ်​ခဲ့...Crossdressingကို သာမန်​မဟုတ်​သည့်​ စိတ်​စွဲမှုတစ်​ခုလို့ သတ်​မှတ်​မိသည့်​အတွက်​ လှို...
193K 16.9K 38
ဒီထဲကဇာတ်ကောင်တွေက အပြင်မှာတကယ့်real coupleပါ။ ကျွန်တော်က xing ye fanဖြစ်လို့ သူတို့အကြောင်း Own creation fiction ရေးဖြစ်တာပါ။ Story ကတော့ fic ပါပဲ။
223K 27.1K 25
153K 14.3K 18
" Relationship " means the way in which two or more people or things are connected, or the state of being connected. then, add " Dear " in front of " Relationship " This is the story want to talk about.
2.4M 302K 94
Title - The True Conqueror (အောငျနိုငျသူအရှငျ) တောငျပိုငျဘုရငျကွီးလငျးမိုနှငျ့ မွောကျပိုငျးအိမျရှစေံ့ လီခနျြးယုံတို့၏ ကွညျနူးဖှယျ ဒဏ်ဍာရီတဈပုဒျ... Name - The True Conqueror (အောင်နိုင်သူအရှင်) တောင်ပိုင်ဘုရင်ကြီးလင်းမိုနှင့် မြောက်ပိုင်းအိမ်ရှေ့စံ လီချန်းယုံတို့၏ ကြည်နူးဖွယ် ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်...